MoeMaKa Radio & Multimedia - ကျော်သူ
Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity (9th September 2011)
Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity (28th August 2011)
Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity (24th August 2011)
တောင်စွန်းမြို့၊ ဓမ္မဒူတတောရကျောင်းတိုက်ဆရာတော် (ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇောတ)၏ နောင်တော်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ပေါက်စေတီ ကျောင်းတိုက်၏ ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတော် အရှင်သုမိတ္တာဘိဝံသ သက်တော် (၈၇) နှစ်၊ ဝါတော် (၆၇) ဝါသည် ၂၀. ၈. ၂၀၁၁ စနေနေ့တွင် ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူသွားခဲ့သည့်အတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ရက်ရှည်ထားခံ အအေးစနစ်သုံး Cool Box ဖြင့် အပူဇော်ခံ ၅ ရက်တိုင်တိုင်ထားရှိပြီး ၂၄. ၈. ၂၀၁၁ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နေ့လည် (၁း၀၀) နာရီအချိန်တွင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ပေါက်စေတီကျောင်းတိုက်မှ ရေဝေးသုဿန်သို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏ ဆရာတော်ကြီး၏ ပုံတော်တင်ဆောင်ရန် ရှေ့ပြေးမော်တော်ယာဉ်၊ ဆရာတော်ကြီး၏ ကျန်ရစ်သောရုပ်ကလပ်တော်အား အထူးနိဗ္ဗာန်ယာဉ်ဖြင့် ပင့်ဆောင်ကာ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာဖြင့် အန္တိမအဂ္ဂိ ဈာပနအခမ်းအနားအား ကူညီဖေးမ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity (20th August 2011)
Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity (18th August 2011)
မျိုးဆက်ဟောင်း သူရဲကောင်း မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)
၇.၈.၂၀၁၁ တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် ၁၂း၀၀ နာရီအချိန်၌ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် လစဉ်ကျင်းပလျှက်ရှိသော စာပေဟောပြောပွဲတွင် ဆရာမောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) သည် “ယနေ့ ပောာပြောရသည့်ပွဲမျိုးသည် နာရေးကူညီမှုအသင်းရှိ လူငယ်များသည် ကျွန်တော်တို့ မလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်ကိစ္စများ၊ ကျွန်တော်တို့ မဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အရာတွေအား ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့ ခံယူမိပါကြောင်း၊
Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity (14th August 2011)
Results 1 - 11 of 124